Snipping Tool ndiyo yakashata screenshot capturing utility in Windows 10. Yakaunzwa kutanga ne Windows Vista, iyo Yekutapira Turu inokutendera iwe kutora iyoyese skrini, hwindo, kana imwe nharaunda nzvimbo pachiratidziri.
Mumazuva ano Windows 10, Kuchenesa Tool yakagamuchira zvimwe zvigadziridzo. Iko zvino inouya nekunonoka kusarudzwa kwaunogona kushandisa iyo iwe unogona kutora chiratiro mushure mekurumidza kunonoka kusvika ku5 seconds. Izvo zvinhu zvinouya zvakanakisisa panguva yekuunganidza menus. Ikozvino shanduro yeSnipping Tool haisi kutsigira video kutora kunyange.
Vazhinji vashandisi vePC vanowanzoshandisa Snipping Tool kuti vatore zvichemo. Kana iwewo kazhinji uchishandisa Snipping Tool, unogona kunge uchifarira kushandisa zvidzitiro zve keyboard kuti utore skrini uchishandisa Sniping Tool nokukurumidza.
Kunyange zvazvo pasina nzira yakatsaurirwa yekbhobho kunze uko kuti utange Snipping Tool, unogona Dzai nzira shoma yebhobhoyo kuti muzarure Snipping Tool zvichida kuumba nzira shoma yeKutsvaira Chigadziro nekuzogovera tsananguro yebhodi yebhobho kana kuti nekupinza Sniping Tool kubhadha rebasa.
CHERECHEDZA: Tinokukurudzira kuti uende kuburikidza nesu Windows 10 Kugadzirisa Tool Tips uye Tricks zvinotungamirira kuziva zvakawanda pamusoro peKushandura Chimbo.
Tip: In Windows 10, unogona kushandisa Windows logo + Dhinda Chidzitiro chekhibhodi kudimbudzira kutora iyo skrini yese nekukurumidza uye otomatiki kuichengeta kune MifananidzoScreenshots folda.
Snipping Tool keyboard zvishoma nezvishoma Windows 10
Mushure mokutanga Chirongwa Chekutsvaga, unogona kushandisa maitiro ekutsvaga keyboard:
alt + M - Sarudza snipping mode
Ctrl + S - Chengetedza zvakatorwa snip
alt + N - Dzai nyoka itsva uchishandisa yekupedzisira yakashandiswa mode
Ctrl + N - Ita itsva snip
alt + D - Kuderera kunotorwa ne 1-5 seconds
(Pashure pokudzvinyirira Alt + D, unofanirwa kushandisa pasi pakakosha museve kuti usarudze kunonoka)
kusuduruka + arrow keys - Simudza chituti kuti usarudze nzvimbo inonzi rectangular snip
Ctrl + C - Kopi yakatorwa snip kudipiyopu
Esc - Bvisa snip kusarudza
Ctrl + P - Dhinda chinyorwa
Mushure mokutora skrini, unogona kudhinda alt kiyi> tinya T > Press P, H or E kusarudza peni, highlighter, kana kupera, maererano.
Maitiro ekuita Screenshot pa Windows 10
Maitiro Ekugonesa Kana Kuremadza Kubvuta Turu Mu Windows 10
Maitiro Ekubvisa Yekubvutira Turu Uye Snip & Sketch In Windows 10
Microsoft inoburitsa yakagadziridzwa Snipping Chishandiso, Calculator, uye Mail uye Karenda maapplication e Windows Vashandi ve11
Mashandisiro ekushandisa Snip & Sketch kutora, kugadzirisa, uye kugovana mifananidzo
Filed Under: raccourci snipping